June 2021 – Page5– Shwe Yaung Lan
[ June 11, 2021 ] အဘဦးဖိုးနီပြောတဲ့ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ ပါသူများအကြောင်း	Knowledge
[ June 11, 2021 ] အင်းစိန်ထောင်ထဲက အဆိုတော် ပိုပို ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ	Celebrity
[ June 11, 2021 ] ကလေးတွေရဲ့လည်ချောင်းထဲမှာ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပိတ်ဆို့သွားခဲ့ရင် အရေးပေါ် လုပ်သင့်သောနည်း	Knowledge
[ June 11, 2021 ] ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ခါနီးပြီဆိုရင် ဒီ လက္ခဏာ (၅) မျိုး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်	Health
[ June 11, 2021 ] ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အနံ့တွေ ပျောက်အောင် လုပ်တဲ့နည်း	Knowledge
ကလေးတွေ စားကြတဲ့ ဂျယ်လီတွေကို ဘယ်ကနေ ပြုလုပ်သလဲဆိုတာ သင်သိပါသလား …… (ဗဟုသုတအနေဖြင့်)
ဂျယ်လီဟာ လူကြီးလူငယ်မရွေး နှစ်သက်စွာစားသုံးကြတဲ့ အစားအစာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်း အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အစားအစာဆိုလဲမမှားပါဘူးနော် စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် အလွန်အရသာရှိလှတဲ့ ဂျယ်လီလေးတွေအကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သင်ဂျယ်လီတစ်ထုပ်ကိုဝယ်ပြီး အနောက်မှာပါတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ပုံမှန်သဘာဝဖြစ်တဲ့ သကြား၊ အသီးအနှံအရသာတို့အပြင် Gelatin ဆိုတဲ့အရာတစ်မျိုးကိုပါ တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကြည့်ရင် Gelatin ဟာတခြားပါဝင် ပစ္စည်းတစ်မျိုး အမည်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တော့ သူဟာအနံ့မရှိ၊ အရသာမရှိတဲ့ အဝါရောင် စေးကပ်ကပ် ပစ္စည်းတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ကိုဘယ်နေရာကနေ ရသလဲဆိုတော့ တိရစ္ဆာန်အရေခွံနဲ့ အရိုးတွေကို အကြာကြီး […]
မိမိအိမ်ကို အဲကွန်း မသုံးပဲ အပူဒဏ်သက်သာအောင် လုပ်နည်း (၅) မျိုး
(၁) အုပ်ကြွပ်မိုးပါ =============== အုပ်ကြွပ်ဟာ အပူချိန် ၁၃၀၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်လောက်အထိ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့အတွက် မီးလောင်ဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ်။ အိမ်တွင်း အအေးဓာတ်ကို ထိန်းပေးပြီး နေပူဒဏ်ကိုလည်း သွပ်ထပ်များစွာ ခံနိုင်ရည် ရှိပါတယ် ။ (၂) အပူခံဂွမ်း Radiant Barrier သုံးပါ ============================= အပူခံဂွမ်းလို့ လူသိများပြီး စက်ရုံတွေမှာ သုံးတာတွေ့ရပါတယ် ။ မျက်နှာကျက် အပေါ်မှာ တပ်ဆင်ရတဲ့ insulation material […]
မုန့်ဗူးတွေ ကင်မရာဗူးတွေ ဖိနပ်ဗူးတွေထဲမှာ ပါတဲ့ ဒီအထုပ်လေးတွေကို လွှင့်မပစ်လိုက်ပါနဲ့…အရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ်
မုန့်ဘူးတွေ ကင်မရာဘူးတွေ ဖိနပ်ဘူးတွေထဲမှာ Silica Gel Bags လို့ခေါ်တဲ့ ဂျယ်လီလို အလုံးလေးတွေ အစေ့လေးတွေပါတဲ့ အိတ်လေးကို တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ဒီအထုပ်လေးတွေကို တွေ့တာနဲ့ အသုံးမလို လောက်ဘူး အန္တရာယ်ရှိမလားမသိဘူးဆိုပြီး လွှင့်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ ဒီအိတ်လေးတွေက အရမ်းကို အသုံးဝင်ပါတယ်။ သူဟာ ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဒ်ဖြစ်ပြီး ဆီလီကွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဟာ ဘေးနားက အရာဝတ္ထုတွေကို ခြောက်သွေ့နေစေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ အဆိပ်မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေကိုတော့ မထိတွေ့စေ ခိုင်းသင့်ပါဘူး။ ကောက်စားလိုက်တာမျိုး […]
“ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီ” ဆိုတာရှိပေမယ့် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အသက်ရွယ်ကွာလွန်းရင် ဒါတွေဖြစ်လိမ့်မယ်…
“ကြီးရင်မှီ ငယ်ရင်ချီ” ဆိုတာရှိပေမယ့် အိမ်ထောင်တစ်ခုမှာ အသက်ရွယ်ကွာလွန်းရင် ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲ အချစ်မှာ အသက်အရွယ်ဆိုတာမရှိဘူး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ချစ်ရင်ပြီးတာပဲလို့ ဆိုကြတယ် တကယ်တမ်း ချစ်လို့ တွဲပြီဆိုတော့မှ ပြဿနာကစတာ ။ တစ်ခုပြီးတစ်ခုနဲ့ မဆုံးနိုင်တော့ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အသက်ခြင်း တအားကွာနေပြီဆို ဘဝဖြတ်သန်းတာခြင်းလည်း မတူတော့ပါဘူး ။ အမြင်နဲ့ခံယူချက်တွေကလည်းကွာကြတယ် ။ ဒီဒုက္ခတွေကတော့ အသက်ကွာလွန်းသူကို ချစ်မိသူတိုင်း ကြုံရတဲ့ဒုက္ခတွေပဲဖြစ်ပါတယ် ။ (၁) လွှမ်းမိုးခြင်း ============ အသက်ကြီးတဲ့သူကလည်း […]
သင်္ဘောပင် စိုက်တဲ့အခါ “အမ” ပင်ပဲ ဖြစ်လာစေမယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေး
ပထမအဆင့် ========== 1. အသီး​၏အောက်ပိုင်းအခြမ်းမှ အစေ့များကိုယူပါ။ ဒုတိယအဆင့် ========== 2. အစေ့များကိုရေစိမ်၍ ရေပေါ် ပေါ်လာသောအစေ့များကိုဖယ်ပါ။ ရေပေါ် ပေါ်သော အစေ့များသည် ကျန်းမာစွာသီးနိုင်ဖို့အခွင်းရေးနည်းပါသည်။ 3. ကျန်သောအစေ့များကို ရေစစ်ပါ။ သတိ: နေရောင်ဖြင့်အ​ခြောက်မခံရပါ။ နေရောင်ဖြင့်အခြောက်ခံလျှင် အားနည်းသောပျိုးပင်များဖြစ်တတ်ပါသည်။ 4. ရေစစ်ထားသော အစေ့များကို အိုး၌တန်းစိုက်လျင်ပိုကျန်းမာသောအပင်ဖြစ်ပါမည်။ 5. ထိုနောက်အပင်ကို ရေလောင်းပေးပါ၊ နေရောင်ခြည်အောက်ထားပါ။ တတိယအဆင့် =========== 6. ဒုတိယအဆင့်တွင် စိုက်က်ထားသောအပင် […]
သနပ်ခါးကို တနှစ်ပတ်လုံး မှိုမတက်အောင်လုပ်နည်း သနပ်ခါးချစ်သူ အမျိုးတို့ရေ ဒီနေ့ နေလဲသာသမို့ ဗဟုသုတ လေးတခုလုပ်ရအောင်လား။ သနပ်ခါးတွေလိမ်းမကုန်ခင် ဒီတိုင်းထားမယ့်အစား ရေ ဗွှမ်းဗွမ်းဆူတဲ့အထဲ ထည့်ပြုတ်ပြီး ခဏအကြာ ပြန်ဆယ် ရေအေးနဲ့စိမ်ပြီး ပဒပ် အနုလေးနဲ့ တိုက်ဆေးရေစစ်နေလှမ်းထားလိုက်ပါ။ နေပူနဲ့ခြောက်အောင်လှမ်းနော်။ သနပ်ခါးနံ့လေး မယုံနိုင်အောင်မွှေးနေတာတွေ့ရမှာပါ။ မှိုလည်း မတက်တော့ဘူးနော် တနှစ်ပတ်လုံးထားထား ရပြီနော်။ ” ဒီနေ့ လုပ်ဖြစ်တဲ့ ဗဟုသုတလေး အမျိုးတွေကိုမျှဝေပါတယ်နော်” လုပ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ Credit အန်တီစိန် […]
မြေကြီးတူးဖို့ အဆင်မပြေတဲ့နေရာတွေမှာ အရေးပေါ် ဗုံးခိုကျင်း ပြုလုပ်နည်း။
အားလုံး မှတ်ထားကြပါနော် မိုးတွင်းဘက် မြေကြီးတူးဖို့အဆင်မပြေတဲ့အခါ တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါ အကာအကွယ်အနေနဲ့ အုတ်တိုက်အိမ်ဆိုပါက မိမိအိပ်ခန်း သို့ အကာအကွယ်ရှိသော အခန်းထဲတွင် သဲအိတ်ကာအပေါ်တွင်တန်းပစ်ပြီး သဲအိတ်တင်ထားလို့ရပါတယ် ကျည်ကွယ် ဗုံးဒဏ်ကာကွယ်ဖို့ လုပ်ထားလို့ရပါတယ်… တချို့ အိမ်အမြင့်တွေနဲ့သစ်သားအိမ်တွေမှာ အိမ်အောက်ဘက်မှာ သဲအိတ်ကာအပေါ်တန်းပစ်ပြီး ခိုကျင်းသဘော လုပ်ထားလို့ရပါတယ်။ တချို့နေရာတွေမှာ သဲမရှိရင် ဝါးကပ်ယက် ကပ်၂ခုကြား မြေကြီးထည့်ပြီး ယာယီခိုကျင်းပြုလုပ်နိုင်ပါတယ် မြေကြီးနဲ့လုပ်တဲ့အခါ အနည်းဆုံး ၁ပေ ၁ပေခွဲအထူရှိရမှာပါ ပိုထူလေပိုကောင်းလေပါ ဝါးကပ်မရရင် သံဇကာ […]
အိမ် အောက်ထပ်မှာ ဘုရားခန်းထားပြီး ကိုးကွယ်လျှင် အပြစ်ဖြစ်သလား / အပြစ်မဖြစ်ဘူးလား ဆိုတာ…..
“ မေး ” ====== “ အောက်ထပ် ” အိမ်ထောင်စု များ၌ ဘုရားခန်း ထား၍ ကိုးကွယ်ရာ “ အပေါ်ထပ် ” အိမ်ထောင်စု တို့၏ အောက်မှာ ဖြစ်နေတတ်၍ “ ဘုရားခန်း ”၏ အပေါ်၌ သွားလာ နေထိုင်သူ များ၌ အပြစ် ရှိ ပါ သ လား ? ( သို့မဟုတ် ) […]
အသားပိုလေးတွေကို ဖယ်ရှားပေးမယ့် နည်းလမ်းကောင်း (၄)အမျိုးသား
တစ်ချို့ ရင်ဘက်မှာအမျိုးမျိုးသော အသားပိုသေးသေးလေးတွေရှိတတ်ကြပါတယ်။ အဲ့လိုမျိုးရှိနေတာကို မကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ အခုပြောပြမယ့် နည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီး အသားပိုလေးတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်ရအောင်နော်။ ၁။ Tea tree oil ============= Tea tree oil မှာ ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့ မှိုပိုးတွေကို တိုက်ဖျက်ပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိတာကြောင့် အရေပြားအတွက် အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ်။ ဂွမ်းစမှာ Tea tree oil ကိုစွတ်လို့ အသားပိုနေရာမှာ လိမ်းပေးပြီး နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ပြီးရင် ပတ်တီးလေးနဲ့စည်းလို့ […]
ကိုရီးယားအစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် အိမ်မှာကိုယ်တိုင် ပဲခေါက်ဆွဲပြုလုပ်နည်း
ကိုရီးယားအစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်သူများအတွက် အိမ်မှာကိုယ်တိုင် ပဲခေါက်ဆွဲပြုလုပ်နည်း ခေါက်ဆွဲချစ်သူတွေရော ကိုရီးယားအစားအစာ ကြိုက်နှစ်သက်သူတွေပါ ခံတွင်းတွေ့စေမယ့် ပဲခေါက်ဆွဲပြုလုပ်နည်း ဝေမျှပေးသွားချင်ပါတယ်။ ပါဝင်ပစ္စည်းများ – ခေါက်ဆွဲ ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးစာ၊ ဝက်သား သုံးထပ်သား ဝ.၅ ပေါင်၊ မုန်လာဥဖြူ တစ်ဝက်၊ အာလူး ၃ လုံး (အခွံခွာထားပြီး လက်မဝက်ကုဗတုံး တုံးထားပါ)၊ ကြက်သွန်နီ အကြီး ၁ ဥ၊ ဟင်းရွက်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ ဇွန်း၊ ပဲပိစပ်အနှစ် […]
အဘဦးဖိုးနီပြောတဲ့ လက်ဖဝါးပေါ်မှာ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် ဂမ္ဘီရကြက်ခြေ ပါသူများအကြောင်း
အင်းစိန်ထောင်ထဲက အဆိုတော် ပိုပို ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ
ကလေးတွေရဲ့လည်ချောင်းထဲမှာ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပိတ်ဆို့သွားခဲ့ရင် အရေးပေါ် လုပ်သင့်သောနည်း
ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ခါနီးပြီဆိုရင် ဒီ လက္ခဏာ (၅) မျိုး ဖြစ်လာလိမ့်မယ်
ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ အနံ့တွေ ပျောက်အောင် လုပ်တဲ့နည်း